Siyajabula ukumemezela abawinile emncintiswaneni othi "Hlangana nehlobo lokuvuselelwa", esasiqhuba kanye nenkampani ethi "Constellation of Beauty". Abafundi bethu baba mnandi ngempela!
Indawo yokuqala noDarsonval ebusweni, emzimbeni nasezinwele zeGezatone Biolift4118 ijaji elinikezwa kakhulu iRenate ren.****anowa@yandex.ru
Indawo yesibili nedivayisi yokuhlanza ubuso nokukhishwa kwesikhumba Ukuhlanzeka nokubukeka Gezatone AMG108 ithunyelwe ku-Zhenna (londoloza isignesha yombhali) **** k200815@rambler.ru kuye kule collage ehlobo
Indawo yesithathu ne- Massager ebusweni nasemzimbeni weGezatone "Ukwelashwa okukhanyayo namagesi" uthola njengesipho umama ka-Arthur u-artur26.0****@rambler.ru ukuze uthole uthando lomndeni nezithelo zamanzi!
Futhi amakhadi ebhonasi "Ukwakhiwa kobuhle" nge-ruble eyi-1,000 ku-akhawunti athola: 1. Lyudmila ****sovsk@ngs.ru 2. Alena ****_84_ves@mail.ru 3. Lena **** martsenyuk @ yandex. ru 4. Yana ****a92@mail.ru 5. Vika ****l-Fox@yandex.ru 6. Lenochka89 7. Kitten ****e_kitten@bk.ru 8. I-Valeria **** iyatholakala .radio @ mail.ru 9. Julia ****chka.zolotareva.2015@mail.ru 10. Maria ****a.saa@yandex.ru
Sizokuxhumana nawe ukucacisa ikheli lokuthumela lomklomelo!
Umncintiswano we-Creative kusuka salon yomshado "La Sposa De La Rosa"
Imincintiswano yoSuku lukaValentine esikoleni: imidlalo nemisebenzi yabantwana
Imiphumela ye-Contest ye-LIMONI
Umncintiswano wamaRoma kusuka eLamoda
Win imiklomelo ngempi imfashini kusuka Kari!
I-3D-modeling of amabele: i-portal ethandwayo yokuphrinta kwe-3D inomncintiswano wabesifazane
Inhlanganisela ephelele: ama-pancake we-chocolate nama-cherry ne-curd ayisikhilimu
Amakha amafashini entwasahlobo
I-Demodex: izimpawu, izimbangela zokuqala, ukwelashwa
Indlela yokunikeza ivolumu ezinyaweni ezimpandeni?
Amakhukhi we-Nutella ayisikhilimu
Ukuzivocavoca okuphumelelayo ngama-dumbbells kwabesifazane
Vimbela ukoma komuntu usuku lonke